Mayur Times || मयूर टाइम्स || Authentic news from Nepal, Business Politics Society Art and many more ... » भुलेर पनि नखानुस् खाली पेटमा यस्ता खानेकुरा
भुलेर पनि नखानुस् खाली पेटमा यस्ता खानेकुरा
२०७७ चैत १९ गते बिहिबार ०६:०२
गोलभेंडा : गोलभेंडा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक नै हुन्छ । फेसमा कान्ति ल्याउन समेत यसको प्रयोग हुन्छ । तर तपाईलाई थाहा छ ? एकबिहानै खाली पेटमा गोलभेंडा खाँदा यसमा हुने अम्लले पेटमा रहेको ग्यास्ट्रोइंटस्टाइनल एसिडसँग रासायनिक प्रतिक्रिया...
गोलभेंडा : गोलभेंडा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक नै हुन्छ । फेसमा कान्ति ल्याउन समेत यसको प्रयोग हुन्छ । तर तपाईलाई थाहा छ ? एकबिहानै खाली पेटमा गोलभेंडा खाँदा यसमा हुने अम्लले पेटमा रहेको ग्यास्ट्रोइंटस्टाइनल एसिडसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्छ । परिणामस्वरुप पेट दुख्ने, ग्यास्टिक हुने, पेट पोल्ने, बान्ता हुने, पत्थरीको संभावना बढ्ने हुन्छ ।
दूध चिया : बिहानै खाली पेटमा दूध हालेको चिया खानुहुन्छ भने यस्तो बानी त्याग्नुहोस् । दुध चियाले तपाईंको पेटमा ग्याँस्ट्रिकको समस्या असाध्यै बढाउँछ । बिहान मनतातो पानी, वा अघिल्लो दिन तामाको भाडा वा विजय सालको काठको ठेकीमा राखिएको पानी स्वास्थयका लागि निकै श्रेयकर हुन्छ । चिया नै नपिई हुँदैन भनेब्ल्याक टि वा ग्रीन टी पिउनु राम्रो हुने चिकित्सकको सुझाव छ ।
केरा : खाली पेटमा केरा खानु हुँदैन । बिहानै केरा खानु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट राम्रो नहुने चिकित्सक बताउँछन् । बिहानै खालीपेटमा सेवन गरेको केराबाट हाम्रो शरीरमा म्याग्निसियमको मात्रा दुई गुणा बढ्छ र शरीरमा रहेको क्याल्सियमसँग रासायनिक प्रतिक्रिया सुरु हुन्छ । परिणामस्वरुप पेट फुल्ने, ढुस्स हुने, ढ्याउ आउने, अपच हुने तथा एसिडीटि बढ्ने जस्ता समस्या देखिन्छ।
मसालेदार खाना :तपाई ब्रेकफास्टमा बिहानै खालीपेटमा मसलेदार स्पाईसी वा धेरै पिरो खानेकुरा खानुहुन्छ भने स्वास्थमा निकै ठूला समस्या देखिन्छ । बिहान तपाईले लिनुभएको यस्तो ब्रेकफास्टले पुरै दिन तपाईको पेटमा एसिडिटी बनाउँछ । चिकित्सक भन्छन्, दिनभरी ड्याउ आउने, अपाच्य भएजस्तो हुने, पेट पोल्ने, अल्सर जस्ता रोगपनि देखिन सक्छ ।
औषधि : आली पेटमा औषधी खाँदा उत्तिकै होसीयार हुनुपर्छ । औषधिमा रहेको तत्व शरीरभित्र रहेका तत्त्वहरुसँग सिधै मिलेर रासायनिक प्रतिक्रिया दिँदा ठूलै समस्या निम्तन्छ । केहि औषधी छोडेर प्राय औषधी डाक्टरले पनि खाना खाएपछि खानको लागि भन्नुको कारण पनि यहि नै हो ।रोग विसेक पार्न खाएको औषधीले अरु रोग ननिम्त्याउन सक्छ ।
सोडा : खाली पेटमा सोडा खाँदा पनि उत्तिकै जटिल समस्या देखिन्छ । सोडा खाँदा पेटको अम्लसँग मिलेर राशायनिक प्रतिक्रिया सुरु हुन्छ र पेट दुख्ने समस्या बढ्छ । पेट फूल्ने, पेट पोल्ने, दिसा लागेजस्तो हुने, छाति पोल्ने हुनसक्छ ।
सखरखण्ड :सखरखण्डमा प्रशस्त प्रोटिन पाईन्छ । तर खाली पेटमा यसको सेवन राम्रो नहुने चिकीत्सकको भनाई छ । यसमा अधिक मात्रामा हुने प्रोटिनले ग्यास्ट्रिकको समस्या बढ्छ । परिणामस्वरुप पेट पोल्ने, पेट दु’ख्ने, ज’लन र पेट फुल्ने समस्या हुन्छ ।
अल्कोहल : खाली पेटमा अल्कोहल खानु पनि वि*ष सरह हुन्छ । यो कुरा विभिन्न अनुसन्धानले पनि देखाएका छन् । अझै घरेलु म’दिराको सेवनले मानिसको मृ’त्यु समेत हुनसक्छ । त्यसैले चिकित्सक भन्छन्, बिहान केही नखाइकन अ’ल्कोहलजन्य पदार्थ नखानूस् ।
प्रकाशित मिति १९ चैत्र २०७७, बिहीबार ०६:०२